बधाई अनुराधा कोइराला लाई अनि हामी सबै लाई भोट काम लागो नि? ~ Khabardari.com
बधाई अनुराधा कोइराला लाई अनि हामी सबै लाई भोट काम लागो नि?
9:45 PM Admin 1 comment
बधाई अनुराधा कोइराला लाई अनि हामी सबै लाई भोट काम लागो नि? राजनीति हैन अरु काम गर्दा नि प्रसंसा पाइन्छ अनि नाम कमाइनछ भन्ने परमाणित भो नि है? अब नेपाल कहिँ काम नलागेर अउट भएका हरु लाई राजनीति हैन समाज सेवा मा लग्न प्रोत्सान गर्ने कि क्या हो ?
प्रशान्त तामांग लाई पोइसो तिरे र त भोट हाले नेपाली दाजु भाई ले यस्तै फ्री मा अनलाइन् भोट गर्ने प्रतियोगिता मा त अब नेपाली लाइ अरु ले भेट्दैना तर क्यार्ने हो र संबिधान सभा चुनाब मा तेत्रो हर्स ले दिए को भोट को चै खिल्ली उडा का छन् नेता ले सम्झीयो कि रौ ठाडो भएर आउछ बै, लौ न भोट फिर्ता गर्न मिल्ने संबिधान लेख्ने दबाब दियौ यिनलाई क्यर्दा रैचन ...
November 21, 2010 at 10:14 PM Reply
sandharbik lagyo.. tara k garne 2-4 jana karayera ...k huncha ra